Thein Htet Kyaw on Flipboard
Thein Htet Kyaw
11 Flips | 1 Magazine | @TheinHtetKyaw | Keep up with Thein Htet Kyaw on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Thein Htet Kyaw”
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး ဘောလုံးသမားများကို စုစည်းဝယ်ယူလေ့ ရှိခြင်းကြောင့် ကြယ်စင်စု ဘောလုံးအသင်းဟု တင်စားခံရသည့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်သည် ကမ္ဘာ့ဖလား၏ …
Apple က iPhone6အလုံးရေ သန်း ၇၀ မှ ၈၀ ကြား ထုတ်လုပ်မည် Apple က သူ့ရဲ့ Hardware ထုတ်လုပ်သူများထံမှ iPhone6အလုံးရေ သန်း ၇၀ မှ ၈၀ ကြား မှာယူနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ ၄.၇ လက်မ နဲ့ ၅.၅ လက်မ အရွယ် နှစ်မျိုးလုံးအတွက် မှာယူခြင်းဖြစ်ပြီး Apple က Hardware ထုတ်လုပ်သူများကို ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့ ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ မှာယူတဲ့ ပမာဏရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို စတင်ဖြန့်ချီစဉ်မှာ ရောင်းချပေးမှာပါ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ အားလပ်ရက်ရာသီ မတိုင်မီလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သတင်းဖော်ပြတာက Wall Street Journal ဖြစ်ပြီး Apple က အစဉ်အလာအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် နှစ်လယ်ကနေ စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းလောက်မှာ iPhone6ထွက်ရှိလာမယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကြီး iPhone ဟာ အရင်မျိုးဆက်နှစ်ခုထက် ပိုမိုရောင်းအားကောင်းမယ်လို့ Apple က မျှော်လင့်နေတာ သေချာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Apple ဟာ iPhone 5S နဲ့ 5C တို့ကို သန်း ၅၀ နဲ့ ၆၀ ကြားမှာသာ မှာယူခဲ့ပြီး အခုမှာယူမှုထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဖုန်ုးနှစ်လုံးရဲ့ မျက်နှာပြင် အရွယ်ဟာ ၄ လက်မသာ ရှိတဲ့အတွက် Apple ဟာ မျက်နှာပြင်ကြီး Android ဖုန်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ Samsung လို ကုမ္ပဏီတွေကို ဈေးကွက်ဝေစုအပိုင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ iPhone5ကို အဆင့်မြှင့် ပြောင်းကိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ iPhone6ကို ပြောင်းကိုင်ဖို့လည်း အဲဒီအချိန်လောက်မှာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က iPhone 5S ကို ၀ယ်ယူခဲ့သူများအနေနဲ့ iPhone6ကို ကိုင်ရဖို့ တစ်နှစ်လောက်စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးအလိုက်ပေးပြီး iPhone6ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ iPhone မျိုးဆက်သစ် ရောင်းချမယ့်နေ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းက တရုတ်မှ ကြော်ညာတစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့လို့ ပြောပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Apple ဟာ Hardware အစိတ်အပိုင်းများကို မှာယူရာမှာ ပျက်ဆီးမှုနှုန်းကို တွက်ချက်ထားတာပါ။ Apple က iPhone6အလုံးရေ သန်း ၁၂၀ အတွက် လုံလောက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မှာယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲကမှ အနာအဆာမပါတဲ့ ဖုန်းအလုံးရေ သန်း ၇၀ ကနေ ၈၀ ကို မျှော်မှန်းထားတဲ့အတွက် ပျက်ဆီးမှုနှုန်းဟာ မြင့်မားတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ပြည်ပမှ ထုတ်လုပ်သူများအနေနဲ့ Faxconn နဲ့ Pegatron တို့က ၄.၇ လက်မ iPhone6ကို ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး Hon Hai က ၅.၅ လက်မ iPhone6ကို ထုတ်လုပ်မှာပါ။ Apple က တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီ iPhone6ကို ဖြန့်ဖြူးချင်တာကြောင့် ကုမ္ပဏီ သုံးခုဟာ လုပ်သားများစွာ တိုးမြှင့်ပြီး အရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများရဲ့ အဆိုအရ Apple ဟာ ၅.၅ လက်မ iPhone ကို ထုတ်လုပ်စဉ်မှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Hon Hai ဟာ Touch Sensors များကို သီးခြား အလွှာတစ်ထပ်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းရမှာ မဟုတ်ဘဲ LCD ထဲမှာ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရမှာကြောင့်ပါ။ ဒီနည်းပညာကို In-Cell Technology လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၅.၅ လက်မအရွယ် မျက်နှာပြင်မှာ LCD ရဲ့ အထက်မှာ သလင်းကျောက် မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖုံးအုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သလင်းကျောက် မျက်နှာပြင်ဟာ သာမာန် ဖန်သားပြင်ထက် ပိုမိုဈေးကြီးပေမယ့် အကြမ်းခံလို့ စားသုံးသူများအတွက် ကြာရှည်သုံးနိုင်မှာပါ။ iPhone6နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းများကတော့ Optical Image Stabilization နည်းပညာပါတဲ့ ကင်မရာ အသစ် ပါလာပါမယ်။ 128GB Storage ပါတဲ့ အမျိုးအစား အသစ်တစ်ခု ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး သတ္တုကိုယ်ထည်နဲ့ ပါးလွှာတဲ့ စတိုင်ကို သုံးထားမှာပါ။ ကြီးမားတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို မောင်းနှင်ပေးဖို့ သိုလှောင်မှုများပြားတဲ့ ဘက်ထရီကို ပံ့ပိုးပေးထားမှာပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ RAM နဲ့ HD အရည်အသွေးနဲ့ ဖုန်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ Apple က iPhone6ရောင်းချမယ့်ရက်ကို ကြေညာဖို့ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလရဲ့ ပထမ သို့မဟုတ် ဒုတိယပတ်မှာ ပြုလုပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ KTY Link- http://mmconsumerguide.com/?p=4052 LIKE (y) SHARE ✓ LOVE <3 Myanmar Consumer Guide www.mmconsumerguide.com | The Best Product Reviews Radio Talk Show, Magazine & Website in Myanmar ဘာပဲဝယ်ဝယ် Myanmar Consumer Guide ဖတ်ပြီးမှ ဝယ်ပါ။
Microsoft talked up Surface Pro3sales during its fourth-quarter earnings conference call on Tuesday and confirmedadecision not to shipasmaller version of the Surface.<p>"While it's still early, sales are outpacing earlier versions of Surface Pro," Microsoft Chief Financial Officer Amy Hood said …
While iOS and Mac OS X have traditionally followed different release schedules, Apple's recently announced Continuity features suggested it was possible for Apple's two operating systems to debut at the same time. However, Apple is planning to stagger the releases of both iOS 8 and Mac OS X …
Announced last month, the Amazon Fire Phone is the company’s first attempt at mobile hardware. Like its cousins in the Kindle Fire line of tablets, it runsafork of Android and gives you quick access to everything in Amazon’s large (and growing) content library.<p>The device itself hasapremium feel …
There's no staple piece of clothing quite like the plain white T-shirt. Its role in pop culture moved it from an undergarment, worn beneath dress shirts, and placed it front and center. Now, LA's independent record label Hit City USA found the white T to be the most appropriate way to enter the …